OTU ESI WEPU BANNER SITE NA DESKTỌPỤ GỊ SITE NA IJI HITMANPRO KICKSTART - NCHEDO (NJE) - 2019
Isi Nchedo (nje)
Otu esi wepu banner site na desktọpụ gị site na iji HitmanPro Kickstart
Na mbụ, edere m ntụziaka abụọ - Otu esi ewepụ ọkọlọtọ site na desktọọpụ na otu esi ewepụ ọkọlọtọ (nke abụọ, e nwere ụzọ ndị ọzọ, gụnyere otu esi ewepụ ozi Windows egbochi nke gosipụtara tupu mmalite Windows).
Taa, m hụrụ usoro mmemme (ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ mmemme) n'okpuru aha niile bụ HitmanPro, nke e mere iji luso malware, nje, Adware na Malware. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na anụbeghị m banyere usoro ihe omume a na mbụ, o yiri ka ọ bụ ezigbo ewu ewu na, dịka m nwere ike ịkọ, ọ dị irè. N'isiokwu a anyị ga-atụle nwepụ nke ọkọlọtọ Windows egbochi site na Hitmanpro Kickstart.
Rịba ama: na Windows 8 anaghị arụ ọrụ
Ịmepụta ụgbọala nke Hitmanpro Kickstart boot
Ihe mbụ ị chọrọ bụ iji kọmputa na-arụ ọrụ (ịchọrọ ịchọta), gaa na saịtị ọrụ HitmanPro //www.surfright.nl/en/kickstart na budata:
Usoro ihe omume HitmanPro, ma ọ bụrụ na ị na-aga ime windo ngwa ngwa iji wepu ọkọlọtọ
Ihe oyiyi ISO na HitmanPro KickStart, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọkụ a buut disk.
ISO dị mfe: kpocha ya na disk.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ide windo USB USB iji wepụ nje ahụ (Vinlocker), wee malite ibudata HitmanPro wee pịa bọtịnụ ahụ na onyinyo nke obere nwoke na-agba ọsọ.
Na-eburu n'uche na interface nke usoro ihe omume ahụ dị na Russian, mgbe ahụ, ihe niile dị mfe: nkwụnye na USB flash drive, pịa "Download" (a na-ebudata ihe na Intaneti) ma chere ruo mgbe mbanye USB dị njikere.
Ihichapu ọkọlọtọ na-eji windo boot boot
Mgbe disk ma ọ bụ flash drive dị njikere, anyị ga-alaghachi na kọmputa ahụ ekpochi. Na BIOS ịkwesịrị ịwụnye buut site na windo mbanye ma ọ bụ diski. Ozugbo nbudata ị ga - ahụ menu ndị a:
Maka Windows 7, a na-atụ aro ka ịhọrọ ihe mbụ - Dọpụ Master Boot Record (MBR), pịnye 1 wee pịa Tinye. Ọ bụrụ na anaghị arụ ọrụ, gaa na nhọrọ nke abụọ. Iji wepu banner na Windows XP, jiri nhọrọ nke atọ. Biko mara na ọ bụrụ na ịhọrọ menu gosipụtara, nke ị na-enye iji malite usoro mgbake ma ọ bụ jiri nkịtị Windows buut, ị ga-ahọrọ nkịtị buut.
Mgbe nke ahụ gasịrị, kọmputa ahụ ga-anọgide na-buut, Windows (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ onye ọrụ, họrọ ya), ọkọlọtọ ga-emeghe, nke na - ekwu na egbochi Windows na ịchọrọ ịnye ego na nọmba ụfọdụ, ọrụ anyị ga - amalitekwa ya HitmanPro.
N'elu windo, pịa "Ọzọ" (Na-esote), na nke na - esote igbe "M ga-eleba usoro ahụ anya naanị otu ugboro" (ma wepụkwa aha ndebanye aha ahụ. "Pịa" Ọzọ ".
Usoro nchịkọta usoro ga-amalite, na mgbe ị gwụchara, ị ga-ahụ ndepụta egwu, gụnyere ọkọlọtọ, nke a hụrụ na kọmputa ahụ.
Pịa "Na-esote" ma họrọ "Mee ka Ikikere Na-arụ Ọrụ" (ọ dị irè maka ụbọchị 30, iji meekwu ihe ịkwesịrị ịzụta igodo Hitmanpro). Mgbe emechara nke ọma, ihe omume ahụ ga-ewepu ọkọlọtọ na ihe niile ị ga - eme bụ malitegharịa kọmputa ahụ. Echefula iwepu bọọlụ site na windo mbanye ma ọ bụ buut disk.
https://termotools.com ig.termotools.com © Nchedo (nje) 2019